BACCA VS HIGUAIN waa ciyaar kale oo ku dhex socota midda Milan-Juve + Sawirro – Gool FM
BACCA VS HIGUAIN waa ciyaar kale oo ku dhex socota midda Milan-Juve + Sawirro
Raage October 22, 2016
(Milano) 22 Okt 2016 – Waxaa caawa fiidkii kulan la wada sugayo ku ballansan labada kooxood ee aadka ugu xafiiltama Talyaaniga ee AC Milan ee Juventus.
Kooxda Milan oo lib ay ka gaarto Bianconerri ay ugu dambaysay 2012 ayaa caawa iyadoo wajahaysa Juve oo koox ahaan haatan ka da’ wayn kana khibrad badan doonaysa inay muujiso haddii uu jiro wax isbedel ah oo ku yimi bandhigyadeedii bar kuma taalka ahaa sanadihii ugu dambeeyay.
Yeelkeede, tiiyoo ay ciyaartani jirto misna waxaa kusii dhex socota ciyaar kale oo u dhexeeysa labada weerar ee reer Koonfur Ameerika ee Gonzalo Higuain oo xagaagan 90 milyan oo euro kulasoo biiray Juve iyo dhiggiisa Carlos Bacca oo 30 milyan xagaagii hore Milan ugu yimid.
Labada laacib waxay wada leeyihiin min 6 gool iyagoo kaalinta 2-aad uga jira taxa gool dhalinta Serie A oo uu 7 ku hoggaaminayo Edin Dzeko oo Roma u safta.
Su’aasha taagani waa kee caawa ka muuqan doona maqaamka sare ee San Siro?
UC Sampdoria vs Genoa - LIVE + Shaxda sugan (Derby della Lanterna)
EPL: Arsenal oo barbaro la gashay Middlesbrough, xilli macallinkooda Arsene Wenger ay maanta ku beegan tahay dhalashadiisa iyo kulamadii kale… + SAWIRRO